I-OMG Ballpoint pen Voice Recorder, Ibhetri iiyure ezili-13, 8G (SPYV017) | Izisombululo ze-OMG
Le rekhodi engabinayo izitshixo zangaphandle okanye izibane zangaphandle zefowuni kwipenki yomzimba. Ngoko unako ukubhala njengepeni eliqhelekileyo lokubhala ibhola ngelixa urekhoda kwaye akukho mntu uya kuqonda ukuba lo irekhodi-ipeni. I-Mic ekwakhiwe yinto esemgangathweni kwaye inesicatshulwa, inomgangatho orekhodiweyo wokurekhoda umsindo (ukurekhoda ngokucacileyo) kwaye ingarekhoda ngokucacileyo imitha ye-10 kude. Kuyinto ekhangelekayo ekhangelekayo, enqabileyo, enobubanzi bayo be10.8mm. Xa irekhodi yokubhala livuliwe, liya ngqo kwimodi yokurekhoda yezwi.
Battery umthamo: 90MAH
Ixesha lokurekhoda: iiyure 13
Ubungakanani bomkhiqizo: 138X10.8mm
Ukusinda okushiyekile: 31G
3786 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-12 Namhlanje